I-Black Dahlia Murder Case
I-Case Ininzi Engaziqaliweyo Kwimbali YaseCalifornia
Icala le-Black Dahlia Murder lihlala linye yeempawu zeHollywood ezide zenzekile kwaye enye yezona zinto zihlaselayo kwi-1940. Intombazana enhle kakhulu, uElizabethe Mfutshane, yafunyanwa isinqunywe ngesigxina kwaye ibonakala ngendlela ecacileyo ngokwesondo. Kuza kufakwa kwi-media njengoko kubulawa "Black Dahlia".
Kwimimangalo yeendaba ezilandelelanayo, amahlebezi kunye nokucatshulwa kwapapashwa njengenyaniso, kwaye ukungalungi kunye nokunyaniseka kuyaqhubeka nokubethekisa iibali zolwaphulo - mthetho kuze kube yimhla.
Nazi iimbalwa ezimbalwa ezizaziyo ngokuphila nokufa kukaElizabethe Mfutshane.
Elizabeth Short's Childhood Years
U-Elizabeth Short wazalwa ngoJulayi 29, 1924, e-Hyde Park, eMassachusetts kubazali bakaCleo noFiebe Mfutshane. UCleo wenza isakhiwo esilungileyo sokuhlala isigxina segalufa kude kube yilapho ukuxhomekeka kuqhubekile kwishishini. Ngomnyaka we-1930, kunye nokukhathazeka kwakhe kwezoshishino, uCleo wagqiba ekubeni abulale ukuzibulala waza wamshiya uFebe kunye neentombi zabo ezintlanu. Wamisa imoto yakhe ngebhuloho waza waya eKalifornia. Iziphathamandla kunye noFebe bakholelwa ukuba uCoo uzibulale.
Kamva, uCleo wagqiba ekubeni wenza iphutha, wadibana noFiebe waza waxolisa ngenxa yento awayeyenzile. Wacela ukuba abuyele ekhaya. UFebe, oye wabhekana nokuchithwa, wayesebenza imisebenzi yesikhashana, wayemi emigqeni yokufumana uncedo lukawonkewonke waza wakhulisa abantwana abahlanu yedwa, akafuni nxalenye kaCleo aze angavumelani.
Isikolo samabanga aphakamileyo
U-Elizabethe wayengenalo inzululwazi yezemfundo eyafumana ibanga eliphakathi esikolweni esiphakeme.
Washiya isikolo esiphakamileyo kumnyaka wakhe omtsha ngenxa yesifo se-asthma esabandezeleka ukususela ebuntwaneni. Kwagqitywa ukuba kuya kuba ngcono kwimpilo yakhe ukuba ihambe eNew England ngexesha leenyanga zasebusika. Kwaye kwenziwa amalungiselelo ukuba ahambe eFlorida aze ahlale kunye nabahlobo beentsapho, abuyele eMedford ngexesha lokwenziwa kwentwasahlobo nehlobo.
Naphezu kweengxaki zabazali bakhe, uElizabhete waqhubeka ehambelana noyise. Wayekhulela ukuba abe yintombazana encinci kwaye enjengamantombazana ayenomdla wokuya kwii -movie . Njengamantombazana amantombazana amnandi, uElizabhete waba nesithakazelo ekwenzeni imifanekiso kunye ne-movie kunye nokubeka iinjongo zakhe ngelinye ilanga esebenza eHollywood.
Xa wayeneminyaka engama-19, uyise kaElizabhete wamthuma imali yokujoyina eVallejo, eCalifornia. Ukuhlangana kwakhona kwakusisigxina, kwaye ngokukhawuleza uCleo wakhathala ngeendlela zokuphila zika-Elizabeth zokulala emini aze aphume ngemini kude kube sebusuku. UCleo watshela u-Elizabethe ukuba ahambe, waza waya eSanta Barbara.
Iminyaka emithathu ezayo
Kukhona ingxoxo enkulu malunga nokuba u-Elizabeth uchithe iminyaka yakhe yokuhlala. Kuyaziwa ukuba eSanta Barbara wayebanjelwe ukuba aphuze ngaphantsi kwaye wayepakishwe aze abuyele eMedford. Ngokweengxelo kwada ngo-1946, wachitha ixesha eBoston naseMiami. Ngomnyaka we-1944, wathandana noMnumzana Matt Gordon, i- Flying Tiger , kwaye abo babini baxoxa ngomtshato, kodwa wabulawa endleleni eya ekhaya evela empini.
NgoJulayi 1946, wathuthela eLong Beach, eCalifornia ukuba kunye nesoka lakhe elidala, uGordon Fickling, owayehlala eFlorida ngaphambi kobudlelwane bakhe noMat Gordon.
Ulwalamano lwaphela emva nje kokufika kwakhe noElizabethe bajikeleza ngeenyanga ezizayo.
Ubuhle Bobuhle Bokutsho
Abahlobo bathi u-Elizabethe wayethetha ngokunyamezela, inceba, ungengasisi, okanye utshaya, kodwa isonka esithile. Umkhwa wakhe wokulala ekupheleni kwemini kwaye ukuhlala ebusuku kwakuqhubeka nokuphila kwakhe. Wayelungileyo, wayethanda ukugqoka ngokuzikhethela aze aphendukele iintloko ngenxa yesikhumba sakhe esiluhlaza esichasene neenwele zakhe ezimnyama kunye nomso ohlaza okomhlaza ohlaza okwesibhakabhaka. Wabhalela unina ngeveki, eqinisekisa ukuba ubomi bakhe buhamba kakuhle. Abanye bacinga ukuba loo ncwadi yayinguErizabhete umzamo wokugcina unina angakhathazeki.
Abo bajikelezileyo bayazi ukuba kwiinyanga ezimbalwa ezizayo wayedla ngokuqhelekileyo, wayethandwa kakhulu, kodwa ayengazi kakuhle. Ngo-Oktobha noNovemba ka-1946, wayehlala endlwini kaMark Hansen, umnini we-Florentine Gardens.
I-Florentine Gardens yayidume ngokuba yinto edibeneyo yokwahlula e-Hollywood. Ngokweengxelo, uHanen kuthiwa wayenabhinqa abathandekayo abahlala ndawonye ekhaya lakhe, elalikho emva kwebhula.
Idilesi yeAlbette yokugqibela eyaziwayo e-Hollywood yayinguChansela Apartments ngo-1842 N. Cherokee, apho yena kunye namanye amantombazana amane ahlala khona.
NgoDisemba, uElizabhete wagibela ibhasi waza wasuka eHollywood eSan Diego. Wadibana noDorothy French, owamvalela waza wamnika indawo yokuhlala. Wahlala kunye nosapho lwaseFransi kwada kwaJanuwari xa ekugqibeleni wacela ukuba ahambe.
URobert Manley wayeneminyaka engama-25 ubudala kwaye watshata, esebenza njengomthengisi. Ngokweengxelo, uManley waqala ukudibana no-Elizabeth e-San Diego waza wamphathisa waya endlwini yaseFransi apho wayehlala khona. Xa wayecelwa ukuba ahambe, kwakungumntu uManley owaza wamqhubela eBhotela yaseBiltmore eDestown apho kwakufuneka adibana noodadewabo. NgokukaManley, wayeceba ukuhamba noodadewabo eBerkeley.
UManley wahamba e-Elizabethe waya kwindawo yehotele apho wayemshiya malunga no-6: 30 ntambama waza wabuyela ekhaya lakhe eSan Diego. Xa u-Elizabeth Short wabuya emva kokuthetha ukuba u-Manley uyaziwayo.
NgoJanuwari 15, 1947, uElizabethe Mfutshane ufunyanwe wabulawa, umzimba wakhe washiya kwisithuba esingenanto kwiSouth Norton Avenue phakathi kwe-39 Street Street kunye neColiseum. U-Betem Bersinger ubenomntu obenomdla wayephethe intombazana yakhe nentombi yakhe eneminyaka emithathu ubudala xa eqonda ukuba oko wayekhangela kwakungekho yindoda kodwa ungumzimba wangempela kwinqanaba elisendleleni apho wayehamba khona.
Waya kwindlu esondeleyo, wenza umnxeba engaziwa kumapolisa, waza wachaza umzimba .
Xa kufika iphoyisa kwindawo leyo, bafumana isidumbu somfazi osemncinci owayebhinqileyo, wabonakalisa ubuso bakhe emhlabathini kunye neengalo zakhe phezu kwentloko yakhe kunye nesiqingatha sakhe esingaphantsi safaka unyawo lwakhe kude nomso. Imilenze yakhe yayivulekile kwindawo engcolileyo, kwaye umlomo wakhe wawuneemitha-intshi ezintathu ujikeleza kwicala ngalinye. Ukutshiswa kwamagumbi kufunyenwe kwizandla zakhe nangamaqabunga. Intloko ubuso kunye nomzimba waxhatshazwa kwaye wanqunyulwa. Kwakukho igazi elincinane kwimeko, ebonisa ukuba ngubani owamshiya, wahlamba umzimba ngaphambi kokungenisa kwiqashiso.
Indawo yokulwa nobugebengu ngokukhawuleza izaliswe ngamapolisa, abameli, kunye nabanyathelisi. Kwaye kamva ichazwa njengengaphandle kokulawula, abantu bebethawula naluphina ubungqina bophando abanethemba lokufumana.
Ngeempawu zeminwe, umzimba wachazwa kungekudala u-Elizabeth Elizabeth oneminyaka engama-22 okanye njengoko umshicileli wambiza ngokuthi, "UMnyama Dahlia." Uphando olunzulu lokufumana umbulali lwaqaliswa. Ngenxa yobundlobongela bokubulala kunye nexesha likaElizabethe ngeendlela zokuphila, amahemuhemu kunye nokucatshulwa kwande kakhulu, kaninzi kuthiwa ingenakungqiniswanga njengokuba kunjalo kumaphephandaba.
Abango-200 abasolwandle babuzwa udliwano-ndlebe, ngezinye ii-polygraphed, kodwa ekugqibeleni bakhululwa. Imizamo yokukhathala yenziwa ukuba iqhube nayiphi na inkokheli okanye nayiphi na ininzi yokuvuma ukuxoka kukaElizabethe ngamadoda nabasetyhini.
Nangona kukho iinzame ezenziwe ngabaphenyi, ityala liye lahlala linye lezona zidumileyo kwiimeko zaseCalifornia .
Uphando lwe-JonBenet Ramsey
Iphrofayela kaLarry Swartz kunye ne-Sudden Fury Murders
Iphrofayili yoMbulali wabantwana uSusan Smith
Iphrofayili kaBrian David Mitchell kunye nokuThunjwa kwe-Elizabeth Smart
USusan Atkins akaSadie Mae Glutz
Amacala eSuzanne Basso
Iprofayile yeSadistic Killer kunye noMlwenguli uCharles Ng
I-Arctic Ocean okanye i-Arctic Sea?
Yiyiphi i-Indie Folk Music?
Indlela imibala echaphazela ngayo ukuziphatha kwabantu
Imfazwe Yehlabathi II: I-Admiral Jesse B. Oldendorf
Kutheni Izilwanyana Nezinye Iinqununu Zomeleleyo?
Indlela yokukhohlisa ingxelo yesiFrentshi
Qaphela lo Mfokazi oqhelekileyo waseJamani: 'Ich Bin Kalt.'
UGeorge W. Bush - UMongameli we-Forty-Thirty we-United States
Saturn kwiNdlu yesiBini
Indlela yokufunda Inveli yokuqala yeGeorge Saunders, "uLincoln eBardo"
I-Sassafras, Umthi oqhelekileyo eNyakatho Melika
I-optionParser: I-Parsing-Line-Line Options kwi-Ruby Way
Izinto ezi-5 zokumazi nge-Gymnast Nastia Liukin
I-Nehead Head Nebula: Ifu Elimnyama Elinesimo Esiqhelekileyo
Igrammar Ukubetha Abaqalayo besiNgesi - iSicwangciso soSifundo
Funda Ngeengqungquthela zeVolcanic (i-Extrusive Igneous Rocks)
Cornell GPA, SAT, kunye ne-ACT Data
I-Fort McHenry yaseBaltimore
Ukuxilongwa nokuCwangcisa iHolo
Iinkolelo zeCawa zeMethodist kunye neZenzo